Ary ny Apple Watch Series 3 anao dia mirakitra ny asan'ny Ski sy Snowboard | Avy amin'ny mac aho
Ankehitriny ny Apple Watch Series 3 dia mirakitra ny hetsika Ski sy Snowboard
Ny Apple Watch Series 3 dia manana fahaiza-manao betsaka noho ilay naseho tamin'ny voalohany. Noho ny isan'ny sensor sy ny GPS Chip izay nampidirina tao amin'ny Series 2, afaka manangona vaovao amin'ny fanazaran-tena isan'andro izahay. Ny mihazakazaka na dia milomano aza dia asa ataon'ny famantaranandro fanatanjahantena maro.
Androany dia fantatsika fa ny kinova amin'ny watchOS 4.2. Anisan'izany API vaovao hanoratana vaovao momba ny fanatanjahan-tena amin'ny lanezy. Ireo mpandraharaha dia tsy ela akory dia ho avy ary ny fampiharana toa izany Slopes, Snoww, Squaw Alpine, Snocru ary Ski Tracks, dia mifanaraka amin'ny angona nangonin'ny Apple watch amin'ny fidinana mitsangana, ny halavirana, ny isan'ny hazakazaka, ny hafainganam-pandeha ary ny kaloria entina mandoro.
Ny Series 3 no hany tokana miaraka amin'ny altimeter, fitakiana ilaina amin'ny firaketana ny tehezan-tehezan-tendrombohitra sy amin'ny fanaovana kajy mazava kokoa.
Na dia ny API ao amin'ny watchOS 4.2 aza. miasa, ny fampiharana ofisialy dia tsy mampiditra ny angona nangonina tamin'ny fiofanana amin'ny lanezy. Marina fa ny fampiharana ny Workout dia misy sokajy Snow Sports, saingy tsy ampiharina.
Mifanaraka amin'ny tahiry Apple hafa, ny orinasa dia manomana ireo fiasa ireo ho azy ireo hampiarina sy ampiharin'ny antoko fahatelo. Ny fandrefesana, ny haingam-pandeha ary ny fandrefesana GPS dia manangona angon-drakitra handrefesana ny kaloria, ny fidinana na ny hafainganam-pandeha, ankoatry ny masontsivana hafa. Ny API vaovao dia mihevitra ny fotoana itondranao ny tehezan-trano noho ny altimeter sy ny hafainganan'ny dia ataonao.
Ny hetsika nangonina dia nafindra amin'ny angona HealthKit ary manampy anao hamita ny peratra hetsika, toy ny hoe fanatanjahan-tena hafa. Ho fanampin'izay, vonona ny hiato ny fampiharana, rehefa hitany fa miato kely ianao, na miala sasatra na mamerimberina.
Anisan'ny lisitry ny rindranasa izay mampihatra ny watchOS 4.2 API dia ahitantsika izany ao amin'ireo rindranasa Slope sy Snoww, dia mifanaraka amin'ny SiriKit. Noho izany, afaka manome torolàlana ho an'i Siri isika mifandraika amin'ny hetsika ataontsika amin'izao fotoana izao. Manantena izahay fa ny Apple dia manohy mampiditra endri-javatra amin'ny Apple Watch, satria ny fahafaha-miasa amin'ny GPS anatiny sy ny altimeter dia ahafahan'ny tontolon'ny fahafaha-manao zavatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Ankehitriny ny Apple Watch Series 3 dia mirakitra ny hetsika Ski sy Snowboard
Fantatrao ve ny zoro mafana ao amin'ny macOS? Androany isika dia manazava hoe iza izy ireo ary ahoana ny fomba handaminana azy ireo
Unsplash Wallpapers, manova ny sary an-tsoratry ny Mac anao